Iindlela ezi-5 zoRhwebo ngeeNtengiso ezivela kwi-Hyperlocal Social Monitoring | Martech Zone
Iindlela ezi-5 zoRhwebo ngeeNtengiso ezivela kwi-Hyperlocal Social Monitoring
NgoLwesihlanu, Septemba 19, 2014 NgoLwesihlanu, Septemba 19, 2014 UNathan Chandra
Iifemu zentengiso zikhuphisana neevenkile ezinkulu ezikwi-Intanethi ezifana Amazon kwaye Zappos. Iivenkile ezithengisa izitena nodaka zijolise ekunikezeleni ngamava amahle kubathengi babo. Ukuhamba ngeenyawo linyathelo lokukhuthaza abathengi kunye nomdla (kutheni le nto umntu ekhethe ukuza evenkileni ezokuthenga xa ukhetho lokuthenga kwi-Intanethi lukhona).
Uncedo lokhuphiswano nawuphi na umthengisi ongcono kwivenkile ekwi-Intanethi kukuba umthengi ukufuphi kwaye ukulungele ukuthenga. Imizamo yokuthengisa esekwe kwindawo iya isulungeka ngakumbi kwaye ibonelela ngeendlela ezininzi zokukhokelela umthengi emnyango wakho nasekuthengeni.
Yintoni ukuthengisa kwehyperlocal?
Intengiso ye-Hyperlocal iye yajikeleza ixesha elide kune-Intanethi. Intambo, iphephandaba, kunye nabathengisi bemeyile abathe ngqo bakwazile ukujolisa kwintengiso kwiiqoqo ezixineneyo kakhulu zamakhaya kunye namashishini ukuhanjiswa okuphezulu. Ukukhawuleza phambili ngoku kunye ne-hyperlocal ngokubanzi kubhekisa kubuchule bokucofa kwimithombo yeendaba kwi-Intanethi okanye kwiselfowuni kwaye uchonge eyona ndawo kanye amathemba, ukuhambisa izibonelelo ngexesha kubo njengoko befika kwindawo ethile.
Yintoni i-Omni-Channel Marketing?
Intengiso ye-Omni-Channel ibhekisa ekukhuthazeni nakwintengiso ecwangciswe ngobuchule kuwo onke amajelo afumanekayo nolungiselelwe ukufikelela kwithemba elifanayo. Ngaphandle kweyona venkile ithengiswayo, zonxibelelwano ezikufutshane (NFC), ukuthengisa kufutshane, I-SMS kunye neMMSIiNkqubo zeMfonomfono, ukuThengisa nge-imeyile, iThelevishini, iRadiyo, iMeyile ngqo, iiKhathalogu kunye namanye amathuba anokusetyenziselwa ukukhuthaza ukunikezela abathengi nabathengi.
Ukusebenza Isicwangciso-qhinga sentengiso yokuthengisa isitshixo ekuphumeleleni kweefemu zentengiso. Sebenzisa itekhnoloji esekwe kwindawo ukubeka esweni imidiya yoluntu kunye nokuchonga ithemba yindlela ethembekileyo nesebenzayo yokuthengisa kubathengi abanokubakho.
Ukuthengisa amajelo e-Omni kunye nokufikelela kubalulekile kwimizi-mveliso yokuthengisa njengoko icutha umsantsa wamava abonakalayo kunye namava ezitena kunye nevenkile. Umzekelo, Ivenkile ka-Apple, uyilo, ukusebenza ngokutyibilikayo, kunye nenkonzo yabathengi enomdla yokuncoma iinkonzo zabo ezikwi-Intanethi ezinje ngeTunes, App Store (iingcebiso), njl njl.
Iindawo ezi-5 zeNdawo yokuThengisa zixhamla kwiiHyperlocal Social Monitors
Fikelela ngaphandle ngelixa iThemba lakho liKhathalele -I-Hyperlocal Social Monitors zinokusebenza zombini kunye nendlela yokunxibelelana. Ukuba umsebenzisi uthumele iTwitter kwi-Intanethi, kukho ixesha elincinci (malunga nemizuzu emi-2-3) apho umsebenzisi elindele impendulo, ilizwi, okanye uluvo kweso sithuba. Ukuba iifemu zentengiso ziphendula ngaphakathi kwewindow, ziya kufumana ingqalelo epheleleyo kumthengi. Impendulo kufuneka inikezele umnxeba kwisenzo, okanye yakhe incoko.
Uloyiso lomntu olungaqondakaliyo -Ukuthengisa kuyasebenza xa kusenziwa ubuqu ngakumbi kwaye kufanelekile kule ndawo kuthethwa ngayo. Ngokusebenzisa iiHyperlocal Social Monitors, iifemu zentengiso zinokujongana neemfuno zommandla ngokufezekileyo nangokufanelekileyo, kwaye zakhe ubudlelwane obusondeleyo ngakumbi phakathi kophawu kunye nomthengi.
Ukujolisa kwiimpembelelo zasekuhlaleni -Abaphembeleli bezentlalo abanakubonwa ngokujonga kubo. Nangona kunjalo, ezinye ii-Hyperlocal Social Monitors zibonelela ngezixhobo eziyimfuneko kunye neempawu eziya kuthi zibonelele ngokuqonda okunzulu kumsebenzisi weendaba zosasazo okanye kumthengi. Amanqaku eKlout, abalandeli, okanye inani labahlobo zizalathi ezibalulekileyo ekubalulekeni kwamava omntu ngexesha lokuthenga kwabo. Iimpembelelo ezinomvuzo ziya kuba yeyona ndlela ilula kunye neyona ilungileyo yokufikelela kubathengi bendawo entsha kunye nokuxhobisa uphawu kwindawo yakho.
Indawo yokuThengisa ngundoqo -Abathengi basebenzisa imithombo yeendaba kwezentlalo ukufikelela kwihlabathi ukuze bafumane umbono wento abanqwenela ukuyithenga. Ukukhuthaza ukuthengwa, ngokwabelana ngentengiso yolo suku, okanye amanqaku amabhaso afunyenweyo… njl.njl umthengi uya kukhuthazeka ngakumbi kwaye kunokwenzeka ukuba ayithenge loo nto. Abathengi abasoloko beqonda ngeedili ezinkulu, kwaye ukuze baziswe kuya kubenza bonwabe ngakumbi kwaye bakhe imeko ethembekileyo yokuthembela kuhlobo lwentengiso.
Linganisa impumelelo -Zimbalwa izixhobo zeHyperlocal zeMithombo yeendaba ezibonelela ngokusebenza okwenza ukuba amashishini alinganise impumelelo yesicwangciso sabo seendaba zentlalo. Nokuba idibanisa iCRM, i-BI, okanye ukudibanisa idatha yemidiya yoluntu (uluvo, impembelelo, ukufikelela) kunye neemetric zentengiso, zonke ngoku zinokubulelwa kubuchwephesha beqonga lobuchwephesha- njengee-API kunye netekhnoloji yefu.
Malunga nokuHlolwa kweNtlalontle ye-WeLink Hyperlocal
WeLink's isixhobo sokubeka iliso kwezentlalo, iWeLink yeNtlalontle, yenzelwe ukufezekisa indawo ekhokelayo yendawo. Injongo yethu kukufumana abaphulaphuli bakho kungekuphela ngegama elingundoqo, kodwa fumana abaphulaphuli bakho kwindawo, okanye kwindawo, yomdla.
Sebenzisa i-WeLink yezeNtlalontle ukubiyela nge-geo isixhobo sokubeka iliso, umthengisi unokubeka nje isikhonkwane ngaphezulu kwendawo ekuthengiswa kuyo, asete irediyo yomdla, kunye nokufikelela kubutyebi bedatha yemithombo yeendaba enamagama aphambili anomdla kunye nabasebenzisi beendaba zosasazo abakufutshane.
Umthengisi unokuvavanya uluvo, iincoko, uphononongo kunye neefoto ezilayishwe kwimithombo yeendaba zosasazo ngothungelwano olufana ne-Twitter, i-Instagram kunye ne-Foursquare. Iqonga ke linika ithuba lokuzibandakanya nomthengi onomdla ngokubanika inkuthazo- nokuba ikwimo yamakhuphoni, izaphulelo, iingcebiso okanye ulwazi- ukundwendwela indawo.
tags: idatha yeselulaI-hyperlocalIntengiso yehyperlocalIvenkile yokuthengisabasekuhlaleniindawo yentengiso esekwe kwindawoUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiidatha yeselulaidatha yemigodi ephathekayonathan chandrakufutshane nonxibelelwano lwentsimiNFCIntengiso ye-omni-channelukusondelaukuthengisa kufutshaneukuthengisaIvenkile yokuthengisaSocial Media Marketingi-solomoUbumnandi
UNathan nguMsunguli we-Co WeLink, ukubeka esweni imithombo yeendaba kwezentlalo kunye neqonga lentengiso ekujolise kulo eliqhuba ixabiso ukusuka kwindawo esekwe kwiincoko zentlalo, evumela abathengisi ukuba bacofe isixa esikhulu sedatha yezentlalo kwideshibhodi enobunkunkqele.
Ungayilinganisa njani iMbuyekezo kwiTyala leMithombo yeendaba
Iinkonzo kunye neengozi zeNtengiso yeendaba zeNtlalo